Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nisintaka, nihitsoka, nanafoanana ireo mpizahatany: savorovoro tany Alemana, Suisse ary Austria
Mpizahatany an'arivony no namarana ny fialantsasatra Krismasy farany teo tany Alpes ny alahady nifindra toerana. Anisan'izany ireo mpitsidika ilay glacier Matterhorn malaza any Suisse. Ny seranam-piaramanidina sy ny lamasinina dia niaina fanafoanana faobe.
Ny oram-panala mavesatra noho ny mahazatra dia nanapaka ny tanàna amin'ny toerana avo kokoa ary nampitombo ny fandrahonana ateraky ny avalances. Mpanamboatra fialan-tsasatry ny ririnina an'arivony no voafandrika ao amin'ireo toeram-pisakafoanana ski malaza indrindra any Alemana, Austria ary Suisse.
Nampitandrina ny tompon'andraikitra ny alahady teo ny amin'ny risika atahorana indrindra amin'ny horohoron-tany taorian'ny fandalàn'ny oram-panala ny Eropa afovoany sabotsy, namono olona roa farafahakeliny ary mpizahatany an-jatony maro no tratry ny lanezy noho ny lanezy.
Olona iray no namoy ny ainy tamin'ny sabotsy teo rehefa nisy fiara iray nianjera tamin'ny làlana malaky akaikin'ny tanànan'i Bad Toelz ka nifatratra tamin'ny fiara hafa. Lehilahy iray 19 taona no maty noho ny ratra vokatry ny fifandonana. Efatra hafa naratra tamin'io fianjerana io.
Vehivavy 20 taona no namoy ny ainy tamin'ny sabotsy tany amin'ny avalanche iray tany Alemana. Ilay vehivavy dia tao anatin'ny vondrona mpizaha tany nitsidika ny tendrombohitra Teisenberg (haavo 4,373 XNUMX metatra) rehefa niseho ny horohoron-tany. Tsy nisy hafa naratra ary tsy mbola nisy pitsopitsony navoaka.
Tany Aotrisy, ny fampielezam-baovaom-bahoaka ORF dia nitatitra fa maty ny alahady ny lehilahy iray 26 taona rehefa voadona tamin'ny horohoron-tany rehefa nanao ski teo akaikin'ny tanànan'i Schoppernau.
Mponina sy mpizahatany manodidina ny 600 no tapaka tany amin'ireo tanàna any amin'ny faritr'i Styria, any Austria, rehefa tsy azo naleha intsony. Ny vohitra hafa any Alpes dia tapaka ihany koa noho ny làlambe voasakana amin'ny lanezy.
Mpandeha an-jatony no tafahitsoka nandritra ny ora maro tao anaty lamasinina ny alahady teo, rehefa avy nianjera tamina lalan-kely akaikin'i Kitzbuehel, Aotrisy, ny hazo feno lanezy.
Ny vohitra kelin'i St. Johann any Austria dia nafindra toerana satria natahotra ny tompon-trano sao hisy avalanche lehibe.
Mihoatra ny Sidina 200 no nofoanana tamin'ny asabotsy any Munich, Alemana, hoy ny Flight Aware. Ny seranam-piaramanidina hafa voakasik'izany dia ny Innsbruck sy Zurich, any Aostralia. Nofoanana koa ny fiarandalamby tany amin'ny faritra.
Guam dia nahatratra ny taona kalandrie tsara indrindra niaraka tamin'ny mpitsidika 1.55M nankasitrahana tamin'ny taona 2018